ဇော်အောင် (မုံရွာ) ● ဆပ်စပင်းရှင်းတံတား (Suspension Bridge) (မိုးမခ) ဧပြီ ၄၊ ၂ဝ၁၈ မြောင်းမြကြိုးတံတား ပြိုကျပျက်စီးတော့ ဒါဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပထမဆုံးတံတားကြီးတစ်ခု ၂၂ နှစ်အတွင်း ဇတ်သိမ်း ရခြင်းဖြစ်လို့ လူတွေအရမ်းစိတ်ဝင်စားကြပါတယ်။ သံမဏိကြိုးများ ကွာလတီကောင်းလာတဲ့ ကြိုးတံတားများစွာ တည် ဆောက်လာကြပါတယ်။ အလွန်လှပတဲ့ တံတားများဖြစ်လို့ မြို့ရှုခင်းအတွက် အထိမ်းအမှတ်တစ်ခုအဖြစ် တန်ဖိုးထားကြပါ တယ်။ မြောင်းမြကြိုးတံတား၊ ပုသိမ်ကြိုးတံတား စသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း တရုတ်ပညာရှင်များရဲ့ နည်းပညာနဲ့ ကြိုးတံ တားပညာ ရရှိခဲ့ပါတယ်။ သာမန်လူနားလည်တဲ့ ဆပ်စပင်းရှင်းတံတားများအကြောင်း https://en.wikipedia.org/wiki/Suspension_bridge နာမည်ကျော် ဆန်ဖရန်စစ္စကိုကြိုးတံတား ဘယ်လိုတည်ဆောက်ခဲ့ပုံ၊ ကုန်ကျစရိတ်နဲ့ ပညာရှင်တစ်ယောက်က အစအဆုံး တာဝန်ယူ ဆောက်လုပ်ခဲ့ပုံကို မိုးမခမီဒီယာမှာ ကျနော် ဆောင်းပါးတစ်ခုရေးခဲ့ဖူးပါတယ်။...
ဖျာပုံ နီ လုံ ဦး● အ ဆ င်းနှ င့် အ တ က် (မိုးမခ) ဧပြီ ၄၊ ၂၀၁၈ တယောက်ဆင်းလည်း သူ့ အ ချ င်းနှင့် သူ့ အ လ င်းနှ င့် …. တယောက်တက်လည်း သူ့ အ ခ က် နှ င့် သူ့ အ ရွ က် နှ င့် …. အတက်အဆင်း ခရီးလမ်းတွင်းမှာ အလင်းဝေငှ ဆင်းရွှေမြနှင့်...
ကာတွန်း ရာဇာသာစည်ရဲ့ တရားလေးတော့ ထည့်ပါဦး (မိုးမခ) ဧပြီ ၄၊ ၂၀၁၈ Tags: ကာတွန်း ရာဇာသာစည်
လက်ဝါးကြီးအုပ် စင်ကလဲယားရုပ်သံအုပ်စုက မီဒီယာကို တသံတည်းနဲ့ ပြစ်တင်နေ (မိုက်ခဲစိန်) ဧပြီ ၄၊ ၂၀၁၈ မီဒီယာတွေဟာ ဒီမိုကရေစီကို အကြီးအကျယ် ခြိမ်းခြောက်နေပါပြီ။ (This is extremely dangerous to our democracy) ဒီစကားတခွန်းတည်းကို အမေရိကားက မြို့ခံရုပ်သံဌာနပေါင်း ၁၉၀ က သတင်းကြေငြာသူတွေက ထပ်ခါ ထပ်ခါ တသံတည်းထွက်ပြီး ပြောနေကြပါတယ်။ သူတို့တွေက သူတို့အခြေစိုက်ရာ မြို့ခံ ရုပ်သံဝန်ထမ်းတွေ။ main stream media တွေလို တပြည်လုံးလွှင့်တဲ့ ကေဘယ်သတင်းဌာနကြီးတွေက မဟုတ်ပါ။ local tv stations တွေက သတင်းကြေငြာသူတွေပါ။ သူတို့ကို သူတို့ပိုင်ရှင်က ပြောခိုင်းလို့ ထည့်ထည့် ပြောရတာပါ။ ‘မီဒီယာကြီးတွေဟာ မယုံရဘူး၊ fake...
ကာတွန်း OMEGA -ဈေးတက်နေတယ်ဆို … (မိုးမခ) ဧပြီ ၄၊ ၂၀၁၈ Tags: ကာတွန်း - Omega
ခိုင်ကြည်သစ် ● ဖက်ဆစ်ကို ဘယ်သူတွေ ဘယ်လိုတော်လှန်ခဲ့ကြသလဲ (မိုးမခ) ဧပြီ ၃၊ ၂၀၁၈ (၁) ​မြန်မာတမျိုးသားလုံးရဲ့ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးဟာ မကြာမီရက်ပိုင်းအတွင်းမှာ သက်တမ်း (၇၃) နှစ် ပြည့်မြောက်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီတော်လှန်ရေးကြီးရဲ့အထိမ်းအမှတ်ပွဲတွေကို နှစ်စဉ် မတ်လ (၂၇) ရက်ရောက်တိုင်း တော်လှန်ရေးနေ့အဖြစ် သတ်မှတ် ပြီး ကျင်းပခဲ့ပေမယ့် တပ်မတော်နေ့အဖြစ် ပြောင်းလဲခေါ်ဝေါ်ခဲ့တာ နှစ်ပေါင်းအတော်ကြာပြီလို့ ဆိုရမှာပါ။ နှစ်စဉ်ကျင်းပတဲ့ တော်လှန်ရေးအထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားတွေရဲ့ ဦးတည်ချက်တွေနဲ့ အခမ်းအနားကျင်းပခဲ့ပုံတွေက ဖက်ဆစ်တော်လှန် ရေးကို ပြန်ပြောင်းအောက်မေ့မှုမပါတော့တာကြာပြီဖြစ်တာမို့ နောက်ပိုင်းမျိုးဆက်သစ်တွေဟာ ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးကို မှန်မှန်ကန်ကန် ရှုမြင်မှု အားနည်းလာတော့မှာကို စိုးရိမ်မိပါတယ်။ သမိုင်းဖြစ်စဉ် အချိတ်အဆက်တွေပြတ်နေတဲ့ သင်ရိုးညွှန်း တမ်းတွေကလည်း ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးသမိုင်းကို လူငယ်တွေ ပုံပျက်ပန်းပျက်နားလည်စေတဲ့ အချက်တစ်ချက်ပဲလို့ ယူ ဆမိပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးကို...
လှကျော်ဇော ● ဒေါ်ဒေါ် ဒေါ်ခင်မျိုးညွှန့်သို့ … ဂါရဝ (မိုးမခ) ဧပြီ ၃၊ ၂၀၁၈ မတ်လ (၁ဝ) ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာ ဗိုလ်မှူးချစ်ကောင်းရဲ့ဇနီး ဒေါ်ခင်မျိုးညွန့် မတ်လ (၉) ရက်နေ့ညက ကွယ်လွန်သွားပြီဆို တဲ့သတင်း သတင်းကွန်ရက်မှာတက်လာပါတယ်။ အသက် (၉၅) နှစ်ရှိပါပြီ။ အိပ်ရာထဲလဲနေတာတောင် (၇) (၈) နှစ်ရှိခဲ့ပြီ လို့လည်း ကြားရပါတယ်။ ဒေါ်ဒေါ်ငြိမ်းချမ်းစွာအနားယူပါတော့။ မသာယာခဲ့ပေမယ့် လှပလှတဲ့ဘဝကို ဒေါ်ဒေါ်ရခဲ့ပြီးပါပြီ။ ကျွန်မမေမေအကြောင်းရေးတဲ့ဆောင်းပါးများကို စုထုတ်တဲ့ “အလွမ်းစာပန်းခြင်းလေး” စာအုပ်ထွက်အပြီး စာအုပ်ဝေဖန်ရေး ရေးတဲ့ ဆရာကြီးမောင်စွမ်းရည်က ဒီလိုထည့်ရေးထားခဲ့ပါတယ်။ “သခင်အောင်ဆန်း၊ သခင်နု၊ ဒီးဒုတ်ဦးဘချို၊ သခင်မြ၊ သခင်ဗဟိန်း၊ သခင်ဇင်၊ ကာနယ်ချစ်ကောင်းစတဲ့နိုင်ငံရေးသမားတို့ရဲ့ဇနီးတွေအကြောင်းကိုရေးနိုင်ကြရင်ကောင်းမှာပါပဲ” တဲ့။ အဲဒီဆောင်းပါးထဲမှာပဲရေးထားသေးတာက … “တစ်ခါက...
ကာတွန်း ဘဌေးကြည် – ပျော်သလိုလိုတောင် ဖြစ်လာပြီ
ကာတွန်း ဘဌေးကြည် – ပျော်သလိုလိုတောင် ဖြစ်လာပြီ (မိုးမခ) ဧပြီ ၃၊ ၂၀၁၈ Tags: ဘဌေးကြည်
လင်းသက်ငြိမ် ● ငါ အားလုံးကို သတိရ​နေမိတယ်​ (မိုးမခ) ဧပြီ ၃၊ ၂၀၁၈ ဘာဖြစ်​လို့လဲ။ ငါ အားလုံးကို သတိရ​နေမိတယ်​။ ကိုင်​ရုံကိုင်​ကြည့်​ပြီး မဝယ်​ယူဖြစ်​ခဲ့တဲ့ ဖိနပ်​က​လေးကစလို့၊ စုတ်​ပြဲသွားတဲ့ ဂျင်း​ဘောင်းဘီက​လေး တစ်​ထည်​အထိ ငါ သတိရ​နေမိတယ်​။ မ​နေ့ကငါ့အခန်း​ဘေးမှာ သီချင်းလာဆို​နေတဲ့ငှက်​က​လေးကို လည်း သတိရတယ်​။ ​လေနဲ့အတူ ငါ့အခန်းထဲဝင်​ဝင်​လာတတ်​တဲ့ သရက်​ပွင့်​​ခြောက်​က​လေး​တွေကိုလည်း ငါ သတိရ​နေမိ တယ်​။ ဘာဖြစ်​လို့လဲ။ အ​ဝေးမြို့က​လေးက ငါ့သူငယ်​ချင်း​တွေကိုလည်း သတိရတယ်​။ ငါ့ စိတ်​​ပေါ်ဒဏ်​ရာ​တွေ ထွင်းထု​ပေးခဲ့တဲ့တစ်​ချိန်​က ငါ့သူငယ်​ချင်းကို​တောင်​မှ ငါ သတိရ​နေမိတယ်​။ ငါ စိတ်​လက်​ညစ်​ညူးစွာ ထိုင်​ခဲ့ဖူးတဲ့လက်​ဖက်​ရည်​ဆိုင်​က​လေး၊ ည​နေခင်း​တွေမှာ ငါတစ်​​ယောက်​တည်း သွားသွားငို​ကြွေး​လေ့ရှိတဲ့ ​တောင်​ကုန်းထက်​က ​စေတီက​လေး၊ ငါ့ကို​တွေ့တိုင်း အမြဲတမ်းအား​ပေးဆုံးမတတ်​တဲ့ စာအုပ်​ဆိုင်​က​လေးက ဆရာမအားလုံးကို ငါ...
ကာတွန်း Kzzh ရဲ့ အပြောနည်းနည်းလျှော့ပါ … (မိုးမခ) ဧပြီ ၃၊ ၂၀၁၈ Tags: ကာတွန်း - KZZH
ဆောင်းယွန်းလ ● တရားမဖြစ်ရင် တရာဖြစ်မယ် (မိုးမခ) ဧပြီ ၃၊ ၂၀၁၈ ဘာကိုမှ တလို့ မရကြတော့တဲ့အခါ ဘယ်မှာမှန်းမသိရတဲ့ ဘုရားကို လှမ်းတကြတယ် ကျစရာ တရားတွေဆိတ်သုဉ်းသွားတဲ့ ကမ္ဘာမှာ တချို့က အထပ်မြင့်တိုက်ပေါ်ကနေ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပစ်ချသွားခဲ့ကြတယ် ကိုယ်ကောက်ဝတ်လိုက်တဲ့ မနက်ခင်းဟာ အိပ်ယာဘေးပြုတ်ကျသွားခဲ့တဲ့ သန်းခေါင်ယံတုန်းက စိတ်ဓာတ်ပဲ ဖုန်တွေပေကပ်နေလည်း ဘာအရေးလဲ ပြန်လည်လျှော်ဖွပ်ခြင်းမှာ နေမသာပေမယ့်လည်း နေသာပါတယ် ရခဲမှန်းသိရက်နဲ့ကုန်လွယ်အောင် ပြုမူကျင့်ကြံခြင်းဟာ ကိုယ်ပိုင်တဲ့တရားနဲ့သာဆိုင်တာပါ။ ဆောင်းယွန်းလ No tags for this post.
အမ္ဗနဒီကျော်စွာ ● ကဗျာတစ်ပုဒ်၏ တန်ဖိုး (မိုးမခ) ဧပြီ ၃၊ ၂၀၈ ကဗျာတစ်ပုဒ်ရဲ့တန်ဖိုးလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ အလွန်လေးနက်ကျယ်ပြန့်တာကိုတော့ လူတိုင်းသိကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကဗျာဆိုတာမျိုးကလည်း လုံးဝကိုအထိအခိုက် အပွန်းအပဲ့မခံတဲ့ စာပေတို့ရဲ့ နတ်ဘုရားတစ်ပါးလို တန်ခိုးထွားပြီး လူသား တွေရဲ့ စိတ်နှလုံးကိုညှို့ယူဆွဲငင် ထားတတ်တာမို့လည်း ပိုပြီးသတိကြီးကြီးထားကာ ပြောကြားဆွေးနွေးရတဲ့ အကြောင်းခြင်း ရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ။်ဒါပေမယ့် အခုပဲကဗျာတစ်ပုဒ်ရဲ့တန်ဖိုးကို ဆွေးနွေးပြောကြားကြရအောင်ပါ။ အခုလက်ရှိအနေအထားမှာ ဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းကိုပဲ အမှန်အတိုင်း မလိမ်မညာ မကွယ်မဝှက် မထိန်းမသိမ်း ဆွေးနွေးကြရအောင်ပါ။ ပထမဦးဆုံး မဂ္ဂဇင်း ဂျာနယ် စာစောင် သတင်းစာတွေပေါ်က ကဗျာတွေတန်ဖိုးကိုကြည့်ရင် ကဗျာတန်ဖိုး မတူညီကြတာကို တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကဗျာစာမူခကို အများဆုံးချီးမြှင့်ပေးနိုင်တာကတော့ သတင်းစာများလို့ပဲ သတ်မှတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ သတင်းစာများမှာ စာမူရွေးချယ်ဖောပြခံရသောစာမူခများမှာ အနည်းဆုံးငါးထောင်ကျပ်၊ ပုံမှန် ခုနှစ်ထောင်ကျပ်...
ကာတွန်း မောင်ရစ် – ရွှေမိနဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ – Go with the flow
ကာတွန်း မောင်ရစ် – ရွှေမိနဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ – Go with the flow (Academic Weekly, Yangon) မိုးမခ၊ ဧပြီ ၃၊ ၂၀၁၈ No tags for this post.
ဗိုလ်ထက်မင်း – ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးတင်ဦးနဲ့ အမှတ်မထင် ဆုံခဲ့ရ၊ ကြုံခဲ့ရစဉ်က – (၁) (မိုးမခ) ဧပြီ ၃၊ ၂၀၁၈ ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးတင်ဦး ၊ အတွင်းရေးမှူး (၂)နဲ့ အမှတ်မထင် ကြုံခဲ့ရ (ပထမပိုင်း)မေတ္တာရပ်ခံချက် ယခုရေးတော့မည့် ကိုယ်တွေ့ဖြစ်စဉ်တွေမှာလည်း တပ်မတော်အတွင်း သဘောထားတင်းမာသူ အစွန်းရောက်အမြင်ရှိသူများကြောင့် စာရေးသူနဲ့ပတ်သက်ခဲ့တဲ့ တပ်နဲ့ လူပုဂ္ဂိုလ်အရာရှိ၊ အဖွဲ့အစည်း၊ ရပ်ရွာ၊ အရပ်သားရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာနဲ့ လုံခြုံရေး ထိခိုက်နိင်တာမို့တချို့အမည်၊ နေရာနဲ့အချိန်တွေမှာ ချန်လှပ်ထားမည်ဖြစ်ရာ စာဖတ်သူတို့ နားလည်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ တချို့ဖြစ်စဉ် စိန်ခေါ်မှုတွေဟာ ကျောင်းတော်ကြီးက ပို့ချပေးလိုက်တဲ့ နည်းဗျူဟာ၊ သင်ခန်းစာအတိုင်း မဟုတ်ဘဲ အခြေအနေပေးလာတဲ့ အပေါ်မူတည်ပြီး မီးစင်ကြည့်ကရတာမို့ သည်းထိတ်ရင်ဖို ကြုံသလို ဖြေရှင်းကျော်ဖြတ်ရတာလည်းရှိပါတယ်။ စာရေးသူ တပ်မတော်သားဘ၀ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့စဉ်က...
မောင်အောင်မွန် ● ကျွန်တော်တွေးမိသလိုရေးပါမည် (၃၂၈) (မိုးမခ) ဧပြီ ၂၊ ၂ဝ၁၈ သမတအရသာနှင့် မန်းဝင်းမောင် (၁) ၁၉၅၇ ခု၊ မတ်လ။ ကျွန်တော့်တစ်သက်တွင် ပထမဆုံးအကြိမ် စာမေးပွဲကျဖူးသော Ist Year B.Sc (Engg) စာမေးပွဲ စတင်ဖြေဆိုနေရချိန်ဖြစ်သည်။ ကျောင်းမှန်မှန်မတက် စာမကျက်၊ တကသ သို့မူနေ့စဉ်ရောက် သတင်းစာတွေ မပျက်မကွက်ဖတ် နိုင်ငံရေးအကြောင်း ပြောဆိုဆွေးနွေးကြသည့်ထဲ နားထောင်တန်နားထောင် အခွင့်သာလျှင် ဝင်ပါနှင့်မို့ စာမေးပွဲခန်းသို့ပင် မန်းဝင်းမောင်က ကျွန်တော့်ခေါင်းထဲ လိုက်ပါလာ၏။ ဒေါက်တာဘဦး သမတသက်တန်း ကုန်ဆုံးပြီမို့ နောက်တစ်ယောက် ပါလီမန်ပြည်သူ့လွှတ်တော်က ရွေးကောက်တင် မြှောက်ကြရမည်။ (၂) ကရင်တိုင်းရင်းသား အလှည့်ကျ၍ သမတလုပ်ရန် ဝန်ကြီးမန်းဝင်းမောင် အားဝိုင်းဝန်းနားချ၊ သူကလည်းကြောက်အကန် ငြင်းနေပုံသတင်းစာများက ဝေဝေဆာဆာဖော်ပြသည်။...
မောင်မောင်စိုး ● နှင်းဆီနီအိပ်မက်များ (၁၉၇၅ – ၁၉၈ဝ) – အပိုင်း (၆၄) (မိုးမခ) ဧပြီ ၂၊ ၂၀၁၈ ● ၈၁၅ စစ်ဒေသ ဖွဲ့စည်းခြင်း ဆွေးနွေးသဘောတူညီချက်များရပြီးနောက် တရုတ်ပြည်နယ်စပ်တွင်လေ့ကျင့် သင်တန်းပေးထားသောအခါ ပြောက်ကျား ၃ဝဝ ကျော်နှင့် CPB ကေဒါ အင်အား ၄၂ ယောက်အားပူးပေါင်းပြီး ၈၁၅ စစ်ဒေသအား ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ သြဂုတ်လ ၁၅ ရက်နေ့တွင် ထူထောင်ခဲ့သည့် CPB ပါတနေ့အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် စစ်ဒေသအမည်ကို ပေးအပ်ခဲ့သည်။ CPB မှလာသူများကို ရဲဘော်ဖေသောင်း ခေါ် ဦးဘသန်းက ဦးဆောင်သည်။ ရဲဘော်ဖေသောင်းသည် ဘေကျင်းပြန် တ ယောက်ဖြစ်သည်။ ၁၉၆၃ ခုနှစ် ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲကာလက မြန်မာပြည်သို့ ပြန်ရောက်ပြီး...
နေလွဏ်းအိမ် ● အဖိုးတန်စက္ကူ (မိုးမခ) ဧပြီ ၂၊ ၂၀၁၈ အချိန်တွေဘဝတွေကို အဲ့ဒီအတွက်မြှုပ်နှံခဲ့ကြ စီးရာမမှန်တဲ့ရေလှိုင်းတွေကြား ငါးဖြစ်ရတဲ့ဘဝဟာ ငါးစာပဲဖြစ်ခဲ့တယ် လမ်းဘေးကလေးငယ်တွေကအစ တောင်းစားနေသူတွေအဆုံး တစ်ကိုယ်ရေစာ ဆာလောင်မှုအတွက် သိက္ခာတရားတွေကို ချကျွေးခဲ့ကြ တစ်ထောင်တန်တွေဟာ လူကုံထံတွေအတွက် အပေါစားဆိုပေမယ့် ဘဝတချို့အတွက် ဘုရားသခင်ပဲ ကျကွဲသွားတဲ့မနက်ဖြန်တွေထဲ ကြယ်စင်တလုံး အရည်ပျော်သွားတယ် ညာဘက်လက်က တက်တူးပုံကို အသက်သွင်းပြီး တောနက်ထဲကို အစိမ်းလိုက်ခုန်ချ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအတွက် ပြီးတော့ မိသားစုအတွက် တရားခြင်းတွေကိုင်ဆောင်လို့ အဖိုးတန်စက္ကူနောက် ဒုန်းစိုင်းလိုက်ခဲ့တယ်။ ။ နေလွဏ်းအိမ် Tags: နေလွဏ်းအိမ်
ကာတွန်းဆွေသားရဲ့ ကောက်နိုင်လွန်းသူ (မိုးမခ) ဧပြီ ၂၊ ၂၀၁၈ Tags: ကာတွန်းဆွေသား
ဇော်အောင် (မုံရွာ) ● ရန်ကုန်မြို့သစ်ဖွံ့ဖြိုးရေးကုမ္ပဏီ NYDC (မိုးမခ) ဧပြီ ၂၊ ၂ဝ၁၈ ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့က ကျပ် ၁ဝ ဘီလီယံ မတည်ပြီး တည်ထောင်လိုက်ပါပြီ။ အစိုးရက စီးပွားရေးမလုပ်သင့်ပါဆိုတဲ့ အစိုးရဌာနများကို စိတ်ကုန်နေသူများအတွက် ခေါင်းထောင်ကြည့်စရာ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ရန်ကုန် စည်ပင်ကို စီးပွားရေးလုပ်ဖို့ ဥပဒေကို ရန်ကုန်တိုင်းလွှတ်တော်မှာ မဆွေးနွေးခင်မှ ကြေငြာလိုက်ပါတယ်။ လူနဲ့မူ ဘယ်ဟာအရေးကြီးသလဲ ဆွေးနွေးကြသူများက လူကိုပဲပြောင်းလဲချင်ကြပါတယ်။ အခု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အစိုးရ ၂ နှစ်သက်တမ်းမှာ ရင်ကြားစေ့စပ်နေရတာနဲ့ စီးပွားရေးမတိုးတက်လို့ စိတ်ပျက်နေချိန်၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် စီးပွားရေးကိုကိုင်တွယ်တော့မယ်သတင်းကြောင့် အားတက်လာပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ခေါက်ရိုးကျိုးနေတဲ့ ဌာနဆိုင်ရာ အကြီးအကဲ များနဲ့ ဝန်ထမ်းများကိုစိတ်ပျက်နေချိန် ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရတည်ထောင်လိုက်တဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာ ဘယ်သူတွေပါသလဲ ကြည့်ပါတယ်။...
မောင်စွမ်းရည် ● ပန်းရည်ဘဏ်တိုက်ဆောက်သူ (မိုးမခ) ဧပြီ ၂၊ ၂၀၁၈ ကာလပေါ်သီးချင်းလောကမှာ ပန်းရည်ဘဏ်တိုက်သီချင်းဟာ အတော်လေး ခေတ်စားတွင်ကျယ်ခဲ့ပါတယ်။ အလုပ်သမား တွေ အလုပ်လုပ်ကြပုံအကြောင်းကို ပြောကြ ပြကြတဲ့အခါမျိုးမှာ နောက်ခံတေးအဖြစ် ပန်းရည်ဘဏ်တိုက်သီချင်းတပိုင်းတစကို မကြာခဏကြားရဖူးပါတယ်။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း သီချင်းတပိုင်းတစကို မကြာခဏရွတ်ဆိုဖူးပါတယ်။ သူ့ အကြောင်းကို ဆောင်းပါးရေးမိတာလဲ နှစ်ခါသုံးခါထက် မနည်းဘူးထင်ရဲ့။ သူက ကန်မြဲသားပါ။ ကန်မြဲဆိုတာ မြင်းခြံခရိုင် တောင်သာမြို့နယ်မှာ ကန်မြဲ-ဇဂျမ်းဆိုပြီး ရွာကြီးနှစ်ရွာဆက်နေတဲ့ရွာပါ။ ကဗျာဆရာတင်မိုးရဲ့ ဇာတိရပ်ရွာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ခုခါ ကန်မြဲရွာမှာ တင်မိုးစာကြည့်တိုက်ဆိုပြီး တည်ဆောက်ထားတော့ ကဗျာဆရာကြီးတင်မိုးရဲ့ ကြေးသွန်းကိုယ်တပိုင်း ရုပ်တုတခုကိုလည်း တင်မိုးစာကြည့်တိုက်မှာ ထုလုပ်ပုံသွင်းထားပါတဲ့။ ကောင်းလေစွ။ တင်းမိုးရော၊ ကိုအေးကျော်ရော ကန်မြဲ-ဇဂျမ်းရွာသား နှစ်ဦးလုံးဟာ တကယ့်ပစ္စည်းမဲ့ ဆင်းရဲသားတွေပါ။ တင်မိုးရဲ့ အစ်မ...
ကာတွန်း ညီထွေးရဲ့ တမင်လုပ်ထားတာကွ …. (မိုးမခ) ဧပြီ ၂၊ ၂၀၁၈ Tags: ကာတွန်း ညီထွေး
လှကျော်ဇော ● လက်ရှိ ဒီချုပ်ခေါင်းဆောင်များအတွက် သမိုင်းအမွေကောင်း (မိုးမခ) ဧပြီ ၁၊ ၂၀၁၈ မတ်လ (၂၁) ရက်နေ့က နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးထင်ကျော်ရာထူးမှနုတ်ထွက်ခွင့်တောင်းတဲ့စာသတင်း ကွန်ရက်မှာ တက်လာ ပြီးနောက် နောက်ဆက်တွဲသတင်းတွေ တက်လာပါတယ်။ ကျန်းမာရေးတစုံတရာချို့ယွင်းနေမှုကနေ နုတ်ထွက်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းထွက်နေတာကြာနေပေမဲ့ တကယ်ထွက်တော့မယ်ဆိုတော့လည်း လှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်သွားတာပါပဲ။ အဲလိုထွက်လာတဲ့သတင်းများအကြားမှာ ကျွန်မစိတ်ဝင်စားမိတဲ့ သတင်းတချို့ပါလာပါတယ်။ – သမ္မတရာထူးမှ အကြောင်းပြချက်မရှိပဲနုတ်ထွက်တာဖြစ်လို့ ပင်စင်တို့ နစ်နာကြေးတို့ မရနိုင်ကြောင်း။ – သမ္မတရဲ့ဇနီး ဒေါ်စုစုလွင်က မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းစာရင်းစာအိတ်အပ်ထားတာ ပြန်ယူမှာမဟုတ်ကြောင်း၊ သိချင်သူ မည် သူမဆို သွားကြည့်နိုင်ကြောင်း၊ – သမ္မတသက်တမ်း (၂) နှစ်အတွင်း ဘာမှထူးထူးခြားခြားလုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့မှုမရှိကြောင်း၊ ကလေးစာအုပ်ပြပွဲ ဖွင့်ပွဲလေးတခုလုပ်ဆောင်ပေးသွားကြောင်း (အာမနာပပြောစကားများ) စတာများဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ သမ္မတဦးထင်ကျော်ချန်ပေးခဲ့တဲ့ သမိုင်းဝင်အမွေဟာ...
အမ္ဗနဒီကျော်စွာ ● ကျွန်တော်နှင့် ထိုင်ခုံ (မိုးမခ) ဧပြီ ၁၊ ၂၀၁၈ သည်နေ့သည် မနေ့ကလိုမဟုတ်ပါ။ သည်နေ့သည် နေ့ရက်အသစ်တစ်ရက်သာဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့ သာမာန်နေ့ရက်ဖြစ် သည်ဟုပြောဆိုနေရခြင်းကိုက ထူးခြားမှုဖြစ်သည်လို့ မလည်ရှုပ်ဖြစ်အောင် မရှုပ်ရှု့ပ်အောင်လုပ်နေကြသော လောကကြီး တွင် ကိစ္စများမြောင် လူတို့ဘောင်ဆိုသည့်အတိုင်း သည်နေ့လည်း ကျွန်တော်သည် မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးတွင် မှီတင်းနေ ထိုင်ကြသူများထဲမှ ထူးခြားဆန်းပြားတမူထူးတဲ့ လူထူးခြားစာပေဖန်တီးသူ ဆရာ/မများ၏ စာမူများကို ရန်ကုန် မြို့တွင်းတွင်ရှိ သော မဂ္ဂဇင်းဂျာနယ် စာစောင် နေ့စဉ်သတင်းစာတိုက်များဆီသို့ စာမူများချောမောလွယ်ကူအောင်မြင်စွာ ရောက်ရှိဖို့ရာ ရှေ့တန်းထွက်ရပေဦးမည်။ ပထမဆုံးစစ်ပွဲကတော့ ကားမှတ်တိုင်တွင် ရန်သူမဟုတ် မိတ်ဆွေမဟုတ်သူ အာဂလူသားများနှင့် အလုအယက် ထိုင်ခုံတစ် နေရာအတွက် တိုက်ပွဲဝင်ရခြင်း ဖြစ်ပေလိမ့်မည်။ ဟုတ်ပါသည်။ ရန်တွေကုန်သွားသော ရန်ကုန်တွင် အချိန်တွေကိုပါ...
ဖိုးရွှေညီမှိုင်း ● ပလတ်စတစ်များ (မိုးမခ) ဧပြီ ၁၊ ၂၀၁၈ သမားရိုးကျ ထုံးတမ်းစဉ်လာ သဘာဝအတိုင်း မွေးဖွားလာခဲ့ ရီဆိုက်ကယ်လ် ပြန်လုပ်လို့မရနိုင်တဲ့ ရိုးရိုးသစ်ပင်က ရိုးရိုးသစ်ရွက် တရွက်မျှသာ။ သေဆုံးခွင့် မပြုနိုင်ဘူးဆိုရင် ရှင်သန်ခွင့်ကို ပေးပါ ရှင်သန်ခွင့်ကို လိုချင်ပေမယ့် မရနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ သေဆုံးခွင့်ကိုသာ ပေးလိုက်ပါ။ ရှင်သန်ခွင့်မရှိ သေဆုံးခွင့်လည်းမရှိတဲ့ ဒီ … ရီဆိုက်ကယ်လ်ထဲက ပလတ်စတစ်ဘဝကြီးကို ရိုးရိုးသစ်ရွက် ရွံလှပြီ။ ဖိုးရွှေညီမှိုင်း ၂၀၁၈ မတ်လ ၁၉ ရက် Tags: ဖိုးရွှေညီမှိုင်း
ကာတွန်းရာဇာသာစည်ရဲ့ ဖေ့ဘုတ်ခ်ထဲနစ်နေပြီ ကူ၍ဆယ်ပေးကြပါ (မိုးမခ) ဧပြီ ၁၊ ၂၀၁၈ Tags: ကာတွန်းရာဇာသာစည်
ဌေးဝင်း (ဂျာမဏီ) ● ထမင်း (မိုးမခ) ဧပြီ ၁၊ ၂၀၁၈ လောကမှာ ငါဟာ တော်တော်အရေးပါတဲ့ ကောင်ပါလား၊ ငါသာလျှင် အရေးအကြီးဆုံး၊ ငါမရှိရင် မဖြစ်၊ ငါမရှိရင် လူဆိုတဲ့ သတ္တဝါတွေ ဘယ်အသက်ရှင်နေနိုင်မလဲ။ အထူးသဖြင့် အာရှတိုက်သား လူသတ္တဝါတွေပေါ့။ “ရေအသက် တမနက်၊ ထမင်း အသက် တရက်” တဲ့၊ ဆိုရိုးစကားတောင် ရှိသေးမဟုတ်လား။ ငါ တရက်တလေလေးများမရှိခဲ့ရင် ဒီလူသတ္တဝါတွေ မနေနိုင် တော့ဘူး။ ငါ့ကို ဒီလူသတ္တဝါတွေက “ထမင်း” လို့ ခေါ်ကြတယ်။ ငါဘယ်လိုဘယ်ပုံ ထမင်းဘဝရောက်လာလဲ သိလား၊ ဆန်ကနေ ဖြစ်လာတာပေါ့။ လူသတ္တဝါတွေက ဆန်ကနေ ငါ့ကို “ထမင်း” အဖြစ် ချက်ပြုတ်ကြတယ်။ ဆန်ရော ဘယ်ကရလဲ...
မောင်စိန်သော် ● ပန်ယန်းဒေသတိုက်ပွဲ (မိုးမခ) ဧပြီ ၁၊ ၂၀၁၈ ပန်ယန်း ဆိုတာ သံလွင်မြစ် အရှေ့ဘက် ၀ နယ်တောင်ပိုင်းမှာ ရှိပါတယ်၊ သံလွင်မြစ်အနောက်ဘက်ရှိ မိုင်းရှူး မြို့ရဲ့ အရှေ့မြောက်ဘက်လောက် ရှိလိမ့်မယ်လို့ မှန်းဆရပါတယ်။ ပန်ယန်းဟာ မြို့ငယ်ပုံ-အလယ်က လမ်းမ ကြီး၊ အိမ်တွေ တဖက်တတန်း စီဆောက်ထားတဲ့ ဈေးရွာကြီးပါ။ ရှမ်းလူမျိုး၊ ၀ လူမျိုးနဲ့ တရုတ်လူမျိုးတွေ နေထိုင်ကြတယ်။ ပူမုန်းတို့၊ စော်ဘွားတို့နေခဲ့ဖူးတဲ့ အိမ်ဟောင်းတွေလည်းရှိတယ်။ ဒါ့ပြင် ကာကွယ်ရေးဗိုလ် ဟောင်း လားဟူလူမျိုး ကြဆောဗိုလ် ခေါ် ဗိုလ်မီရ အဖွဲ့လည်းနေခဲ့တယ်လို့ သိရတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရောက်စ ဗိုလ်မီရအိမ် ရှိသေးတယ်။ တောင်ကုန်းပေါ်မှာ ပျဉ်ခင်း ပျဉ်ကာ အိမ်တော်တော်ကြီးတယ်။ အစိုးရတပ် စခန်း...
ပန်းချီ သန်းဌေးမောင် အောင်ဝေး -ချ စ် လို့ေ ရးတဲ့ က ဗျာ( ၆ ) (မိုးမခ) ဧပြီ ၁၊ ၂၀၁၈နိုင်ငံတော်ဟာ အချစ်ငတ်နေတယ် အချစ်ငတ်နေတဲ့ နိုင်ငံတော်ပေါ့ ။ ဒီနေ့မှာ အချစ်ငှက်ဟာ မွေးဖွားလာတယ် ဒီနေ့မှာ အချစ်ငှက်တစ်ကောင် လရောင်အောက် မိုးသောက်တေး ဆိုတယ်။ တကယ်တော့ သူရောက်နေတာ အမှောင်ခေတ်ကြီးပဲ သွေးချောင်းစီးနေတဲ့ ခေတ်ကြီးလေ။ သူ ဘယ်သိပါ့ မလဲ စစ်ကိုမုန်းလို့ တိုက်ခဲ့တာ သမ္မတအသစ်ကြီး တက်လာတာ သူ ဘယ်သိပါ့ မလဲ။ တစ်နေ့တည်း၊ တစ်နေ့တည်း နေ့မှာ (ဒုတိယ)သမ္မတရွေး ညမှာ အကယ်ဒမီပေး...
နိုင်ဝင်းသီ – လွင့်​​မျောတ​စ္ဆေ (အက်ဆေးလှည်းတန်း ၄ စာအုပ်မှ) မိုးမခ၊ ဧပြီ ၁၊ ၂၀၁၈ ( တစ် ) မြို့ပြဟာ မိုးရေစက်တွေအောက်မှာ နစ်မြုတ်ငြိမ်သက်လို့ … ရူးနှမ်းနေတဲ့မိုးတိမ်တွေဟာ သွေးရူးသွေးတန်း ပြေးလွှားအော် ဟစ်လို့။ မိုးလေဟာ တရှပ်ရှပ် … လျှပ်နွယ်တွေဟာ တဝင်းဝင်း … “မနိုးပါစေနဲ့မိုးရယ်”ဟာပြန်လည်လို့ မရနိုင်တော့တဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူငယ်ဘဝ။ နှစ်ပေါင်း သုံးဆယ်ကျော်လေးဆယ်နီးပါး ကြာမြင့်ခဲ့ပြီပေါ့။ “မနိုးပါစေနဲ့မိုးရယ်”ကို စွဲမက်နေသော လူတစ်ယောက်ဖြစ်နေဆဲ။ သီချင်းလေးကိုက အလွမ်းပြဇာတ်​လေး တစ်ပုဒ်ကို ငေးငေးရီရီ ထိုင်ကြည့်နေရသလို ထိခိုက်ကြေကွဲစရာကောင်းနေသည်။ နားထောင်မိလေတိုင်းလည်း အသံများရဲ့ ကြည်လင်လှပမှုထဲမှာ အမြဲတမ်းနစ်မျော သွားခဲ့။ လူငယ်ဘဝထဲကို လက်ဝဲဆန်သော အယူအဆနှင့် ​တော်လှန်စာပေအရိပ်တွေ ထိုးကျ​နေခဲ့သော်လည်း ဂီတဟာမွန်းကျပ်နေတဲ့...
ကာတွန်းကိုတေရဲ့ ဖြည်းဖြည်းတွန်းကြပါ … လှမ်းနေပါတယ်ခင်ဗျ (မိုးမခ) ဧပြီ ၁၊ ၂၀၁၈ Tags: ကာတွန်းကိုတေ
Page4of 889«1...23456...889»
>Kachin Refugees accused of drug abuse and detained by Chinese Police
>Kyaw Thu - The White Success Story - Children Art Show